1954-1964 5.5 HP Johnson Seahorse Akụ-UP Usoro | Outboard Boat Motor Mmezi
1954-1964 5.5 HP Johnson Seahorse Akụ-UP Usoro
Ụgbọala maka ọrụ a bụ CD-15 Serial 1698561.
Ndahie: 8.84 cu.in. = 144.8 CCM
Arọ: 56 lbs. = 25.4 n'arọ
Gearcase ruru: 15: 26
Icheku ọkụ plọg: onye mmeri J6C gapped na .030 "(Otu dị ka Lightwin)
Mmanụ ụgbọala / Oil mix: 24: 1 87 octane gas na TC-W3 gosiri outboard mmanụ.
Lower unit mmanụ: 80 / 90W / OMC / BRP HiVis.
A Warning About pressurized Fuel tankị
Mkpụrụ ndị a na-eji tankị mmanụ ọkụ. Kama ịṅụ mmanụ ọkụ site na tank, bọmbụ abụọ ntanetụ ọkụ na-agba n'ime tank, na-agbanye ya na 4-7 PSI nke na-eme ka mmanụ azụ laghachi na moto ahụ. N'ụzọ bụ isi, tankị ndị a na-agbanye ọkụ ọkụ bụ ọkụ dị oke egwu ma ọ bụ ihe mgbawa. PỊA EBE A ịmụtakwu banyere ndị a tankị na otú iji tọghata ndị ọhụrụ ma odi mfe mmanụ ụgbọala tankị.
Oge ka malitere - Ọ bụrụ na ị nwere gas na tank, ị nwere ike ịga n'ihu ma gbalịa ịmalite moto gị. Enweghị ihe dị mkpa na nke a ma e wezụga inwe mmetụta maka ihe dị mma mgbe emere gị. Tupu ịmalite ya, jikọta obere ala n'ime ebe mkpofu jupụtara na mmiri. Rịba ama otú moto ga-esi gbanwee ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ na-arụ ọrụ. Ọzọkwa, rịba ama ma ọ bụrụ na ụgbọala ahụ nwere ezigbo mkpakọ. Nyochaa eriri ahụ ma jide ya iji hụ ma ọ dị mkpa ka a dochie ha.
Ka m na-agbagha ụgbọ ala a, ana m eme atụmatụ ịmecha ihe niile m nwere ike iji akwa na akwa ncha. E nwere ọtụtụ ndị na-ehicha pụrụ iche maka nke a mana m na-ejikarị ụlọ ọcha CLOROX Cleaner Clean na Bleach nke m hụrụ n'okpuru sink. Olileanya, m ga-eweghachi ya tupu nwunye m chọpụta na ọ na-efu. M na-eme atụmatụ ịhazi akụkụ ndị a ka m wepụ ha.
TÅke kwụsịrị Motor-ekpuchi
PỊA EBE A maka nkọwa.
The isi ebe ahụ anyị ga-elekwasị anya na-Powerhead, Mmanụ / Carburetor, mgbanye, Impeller na Lower Unit mmanu.
Tupu ị kpebie ịkwagharị ụgbọ ala gị, ịchọrọ ijide n'aka na moto ahụ ga-agbanye ma ị nwere mkpakọ na abụọ cylinders. Ọ bụrụ na moto ahụ agaghị agbanye site na ịgbanwuo ọkpụkpụ maọbụ na ọ dị ka enweghị mkpakọ, mgbe ahụ, ụgbọ ala gị chọrọ ihe karịrị ntanetị dị mfe. Ị ga-ekpebi otú ị ga-esi chọọ idozi ụgbọala gị na otú oke gị ga-esi rụọ ọrụ gị. Ọ na-adị mfe ịnweta ụda olu. Pistons na-ewepụta ma na-eweghachi mkpakọ na-agbakwasị ụkwụ n'ogo ọhụụ na-enweghị ike karịa ihe a na-ekwu. Achọghị m ịsị na enweghi ike idozi moto maọbụ na ọ gaghị aba uru ma ọ bụrụ na ọ bụ ya na moto m na-eji maka isiokwu a, ọ dịghị mkpa. N'okwu ọzọ, aghaghị m ịhapụ pistons na ụgbọala HP Johnson 15 ma nye ya ndụ ọhụrụ. Ị nwere ike ịnweta akara nchịkọta na mpaghara akpaaka gị na-echekwa maka $ 20 ma ọ bụ $ 30. Mkpakọ ahụ kwesịrị ịnwale ịbụ ma ọ dịkarịa ala 85 ma ọ bụ 90 pound ma eleghị anya na-erughị 100 psi.
Ị nwere ike ịchọrọ eriri ụda na / ma ọ bụ eriri ụdọ. O nwekwara ike iji dochie mmiri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ihe ndị a niile ka dị ma ọ dịghị mkpa maka ọrụ a.
Wepụ na-eji dochie isi gasket.
PỊA EBE A na-agụ banyere-arụ ọrụ na-cylinder isi.
Oge ọ bụla ị nwere moto ochie nke nọdụrụ ala ruo oge ụfọdụ, i nwere ike iche na carburetor chọrọ ọrụ. Gas, karịsịa ma ọ bụrụ na mmanụ ejikọtara ya na mmanụ ga-eme ka ọkpụkpụ gị ma ọ bụ nke ọ bụla na-edozi gị. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ntinye ụlọ ị na-ehichapụ nke ị nwere ike itinye na tank mmanụ gị ma ọ bụ na-abanye n'ime carburetor ahụ, ha agaghị abịaru nso imezu otu ihe ahụ dị ka onye na-arụ ọrụ carburetor. Ọbụna ma ọ bụrụ na echekwara moto ahụ na-enweghị mmanụ ụgbọala na carburetor ahụ, ikuku gas nwere ike ihicha ma gbasaa ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe ị na-agbalị iji ya ọzọ. Nanị ụzọ iji jide n'aka na carburetor ga-arụ ọrụ nke ọma bụ iwepụ, kpochapu, dị ọcha, ma zukọta na akụkụ ọhụrụ, dochie anya, ma gbanwee nke bụ nzọụkwụ na-eme mkpọtụ carburetor. PỊA EBE A maka zuru ezu foto na usoro maka n'ịrụ carburetor akụ na-elu-a moto.
Ewezuga ụzụ na nkwụnye wired, usoro nkwụnye ọkụ niile dị n'okpuru windo. Ụdị magneto mgbanye a moto bụ Flywheel Magneto na-emebi Points. Ọrụ nke mgbanye usoro bụ n'ịwa ezuru voltaji (Gburugburu 20,000 volts) na-awụlikwa elu na ọdịiche na icheku ọkụ plọg eke a icheku ọkụ na na amụnye na mmanụ ụgbọala / ikuku ngwakọta, na iji jide n'aka na voltaji na-anapụta ihe ji nkwụnye na kpọmkwem nri oge PỊA EBE A maka zuru ezu foto na usoro maka n'ịrụ mgbanye usoro akụ na-elu- n'ihi na nke a moto.
Impeller na Lower Unit
Ọ dị mma mgbe niile iji dochie anya ihe na-adịghị mma. Ihe na-ebuli elu bụ otu n'ime akụkụ kachasị njọ nke moto n'ihi na ọ daa, ịnwere ike ịkụnye moto ahụ ngwa ngwa, buru isi, ma ọ bụ nwee nsogbu ndị ọzọ dị mkpa. PỊA EBE A maka zuru ezu foto na usoro maka dochie impeller mmiri mgbapụta na-arụ ọrụ na ala unit.